Iska-horimaad mar kale ka qarxay xaafada Garsoor ee Galkacyo. – Radio Daljir
Iska-horimaad mar kale ka qarxay xaafada Garsoor ee Galkacyo.
Galkacyo, Sept 02 – Abaara 06:00 aroornimo ayuu dib uga bilawdey magaalada Galkacyo iska-horimaad xoogan oo u dhaxeeyay ciidanka ammaanka ee gobolka Puntland iyo kooxo la sheegay in ay gacansaar la leeyiiin Al-shabaab oo ku sugan xaafada Garsoor ee galbeedka magaalada Galkacyo.
Waxaa guud ahaan magaalada laga maqlayaa dhawaaqa rasaasta, waxaana jira barakac xooggan oo ka socota xaafada Garsoor.
Daafaha laamiga iyo xaafadaha magaalada ayaa waxaa lagu arkayaa haween iyo caruur faro badan oo iyagu kasoo cararay rasaasta labada dhinac is-weydaarsanayeen.
Ilaa xilligaan lagama warami karo khasaaraha dhabta ah ee dhimashada iyo dhawaaca ee uu dagaalku gaystay, balse hadal haynta ugu badan ee shacabka ayaa ah in waxyeelada ugu darani ay soo gaartay dadka shacabka ah.
Radio Daljir wali uma suurto galin in ay hesho xog sugan ee khasaaraha dagaalka, balse ilo madaxbanaan ayaa ku waramaya in cisbitalka dhexe ee magaalada Galkacyo saaka la keeney dhaawacyo u badan dad shacab ah.
Shalay gelinkii dambe ayaa isk-horimaadku uu ka bilawday xaafada Garsoor ee galbeedka magaalada Galkacyo; war saxaafaded ka soo baxay dawlada Puntland ayaa lagu sheegay in ciidanka amniga ee gobolku ay hawlgal ka fuliyeen xaafada garsoor, ayna ku jabiyeen kooxo taabcsan Al-shabaab.
Galkacyo ayaa caawa deggan, kaddib iska-hor-imaad maanta ka dhacay.
Galkacyo, Sept 01 – Xaaladda magaalada Galkacyo ayaa haatan deggan kaddib markii duhurnimadii maanta iska-hor-imaad xooggani ka qarxay xaafadda Garsoor ee magaalada Galkacyo, kaasoo u dhexeeyey ciidamada amniga Puntland iyo mellayshiyaad hubaysan oo isla deegaanka ah.
Dagaalka oo socday muddo saacad ku dhaw ayaa inta la hubo waxaa ku dhintay 8 ruux halka dad ka badan 20 kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan, kuwaasi oo iskugu jira askarta dawladda iyo dad shacab ah oo rasaas habaw ahi haleeshay.
Xaaladda degganaansho ee magaalada Galkacyo gaar ahaan xaaladda Garsoor ayaa timid kaddib markii ciidamada dawladdu ay si iskood ah uga soo baxeen xaaladda oo ay maanta galeen.
Dadkii ku dhaawacmay iska-hor-imaadkii maanta ayaa la kala geeyey isbitaallada GMC, isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo iyadoo sidoo kalena la tilmaamayo in dad dhaawac ah la geeyey isbitaalka Al-xayaad oo ku yaalla xaafadda Garsoor.
Wali ma jirto cid si rasmi ah uga hadashay rabshadda maantay dhacday, waxaana idaacadda Daljir ay la xiriirtay madaxda dawladda ee heer xukuumadeed, mid gobol iyo taliyaasha ciidanka hawlgala sameeyey kuwaasi oo dhammaantood ka gaabsaday ka hadalka arrintaasi.
Dagaal xooggan oo Galkacyo ka socda
Galkacyo Sept 01 – Dagaal xooggan ayaa ka bilawday magaalada Galkacyo xilli dhaw kaasoo u dhaxeeya ciidamada ammaanka ee Puntland iyo mellayshiyaad hubaysan kaasoo gaystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jira inkastoo aan tiro rasmi ah la haynin.
Dagaalka ayaa qarxay kaddib markii ciidamada amnigu ay hawlgal ka sameeyeen xaafadda Garsoor ee magaalada Galkacyo durhurnimadii maanta, hawlgalkaasi oo daba-socday dhacdo kale oo barqanimadii maanta ka dhacay isla xaafadda Garsoor taasoo lagu dhaawacay taliye ku-xigeenkii bilayska gobolka Mudug Maxamed Jaamac Warsame ‘Beergeel’.
Dagaalka oo ah mid xooggan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana si weyn xaafadaha kala duwan ee magaalada Galkacyo laga maqlayaa daryanka madaafiicda iyo qoryaha culculus.
Rabshadda duhurnimada maanta bilaabatay ayaa waxaa ka sii horreeyey is-rasaasayn dhimasho iyo dhaawac gaystay oo u dhexaysay ciidanka amniga iyo rag dablay ah, taasoo curtay kaddib markii bilaysku ay damceen in ay qabtaan rag ay sheegeen in ay ku raad-joogeen kuwaasi oo dagaallamay, gacanna ka helay rag kale oo iyana hubaysanaa sida ay Daljir u sheegeen saraakiisha amnigu.
Dhacdadaasi saaka waxaa ku dhintay inta la hubo saddex ruux, 9 kalena waa ay ku dhaawameen kuwaasi oo iskugu jiray askar iyo dad shacab ah, waxaana dadka dhaawacmay ka mid ahaa taliye ku-xigeenkii bilayska gobolka Mudug Maxamed Jaamac Warsame ‘Beergeel’.
Xaaladda magaalada ayaa ah mid kacsan xilligaan, waxaana la dareemaya sansaan-colaadeed iyadoo xaafadda isku-dhucu ka socdana dad badan oo shacab ahi ka carareen.
Taliye ku-xigeenkii bilayska gobolka Mudug Beergeel oo ku dhaawacmay hawlgal bilays.
Galkacyo Sept 01 – Inta la ogyahay 3 qof ayaa dhimatey ku dhawaad 10 qof oo uu ku jiro taliye ku-xigeenka qaybta bilayska gobolka Mudug Maxamed Jaamac Warsame waa ay ku dhaawacmeen iska is-rasaasaynta saaka dhex-martay ciidanka bilayska iyo ragga hubaysan.
Is-rasaasaynta ayaa bilaabatay kaddib markii ciidanka amnigu ay isku-dayeen in ay qabtaan rag la sheegay bilaysku in ay doon-doonayeen kuwaasi oo is-difaacay. dadka dhintay iyo dhaawacmay ayaa iskugu jira bilays iyo dad shacab ah.
Ma jiro ilaa xilligaan hadal kasoo baxay laamaha ammaanka ee gobolka oo ay kaga hadlayaan sida ay wax u dhaceen maantay.
Dhaawacyada dadka wax ku gaareen dhacdadaasi ayaa la keeney isbitalka dhexe ee Gaalkacyo, iyadoo iyadoo inta badan la tilmaamayo in ay qabaan dhaawacyo fudud.
Wixii ka soo kordha xilli dhaw ayaad naga helaysaa.